ဂစ်တ်ဟပ်ဘ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂစ်တ်ဟပ်ဘ် (GitHub, Inc.)
ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၀၈; ၁၄ နှစ် အကြာက (၂၀၀၈-၀၂-08) (as Logical Awesome LLC)
Carrie Olesen (CHRO)
80 (January 2020[update])
ပရောဂျက်တစ်ခုကို စတင်ရန်နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်ဆိုမှသာ လိုအပ်သည်။ ရင်းမြစ်ကြည့်ရန်သာဆိုလျှင် မလိုအပ်ပါ။
သန်း ၄၀ (ဩဂုတ်၊ ၂၀၁၉)
ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၀၈; ၁၄ နှစ် အကြာက (၂၀၀၈-၀၄-10)
ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်(GitHub, Inc.) သည်အမေရိကန်အခြေစိုက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ရေး၏ ရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် လိုအပ်သောဂစ်တ်ရီပိုစစ်တရီများ ကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ ဝက်ဘ်မှတစ်ဆင့် ဖြန့်ချိပေးနိုင်ရန် နေရာနှင့်လိပ်စာ ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၎င်းသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇.၅ ဘီလီယံဖြင့် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်（Microsoft） ပိုင် ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။  ၎င်းသည် ဖြန့်ဝေထားသော ရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် နှင့် ရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအလုပ်များ(source code management -SCM)ကို ဂစ်တ်ကိုသုံး၍ ထောက်ပံ့ပေးပြီး အဆိုပါ စနစ်များနှင့် ဆက်စပ်ရာ အခြားလိုအပ်ချက်များကိုလည်း ထပ်ပိုးပေးသည်။ ၎င်းသည် ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော မည်သူက မည်သည့်နေရာကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်သည်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း(Access Control)လုပ်ငန်းနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်သူအချင်းချင်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ကူညီပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်သည်။ ထိုသို့ ကူညီရာတွင် ပရောဂျက်တိုင်းအတွက် ဆော့ဖ်ဝဲအမှားပြင်မှုရာဇဝင်မှတ်ခြင်း(bug tracking)၊ ဆော့ဖ်ဝဲလုပ်နိုင်စွမ်းအသစ် တောင်းဆိုခြင်း(feature requests)၊ ဆော့ဖ်ဝဲအလုပ်ငယ်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း(task management) နှင့် ဝီကီသုတစာမျက်နှာဖွင့်ပေးခြင်း တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်ကို အခမဲ့သော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများအတွက်သော်လည်းကောင်း သင့်တော်ရာ အသုံးပြုမှုပလန်(plan)များကို ရွေးချယ်ကာ အကောင့်များဖွင့်၍ သုံးစွဲနိုင်သည်။ ရင်းမြစ်မြင် ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်၏ အခမဲ့အကောင့်ကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်သည် အခမဲ့အကောင့်များအပါအဝင် ပလန်(plan)အားလုံးအတွက် အကန့်အသတ်မဲ့ ရင်းမြစ်ကွယ် ရီပိုစစ်တရီများကို ထားသိုခွင့်စပေးသော်လည်း၊ အခမဲ့ပလန်တွင် ထိုရင်းမြစ်ကွယ် ရီပိုစစ်တရီများအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်သူ သုံးယောက်အထိသာ ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ၁၅-ဧပြီ-၂၀၂၀မှစပြီး အခမဲ့ပလန်၏ ရင်းမြစ်ကွယ် ရီပိုစစ်တရီများအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်သူ အရေအတွက်ကို အကန့်အသတ်မရှိ ခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း၊ ထိုရီပိုစစ်တရီများကို ဆက်သွယ်လှုပ်ရှားချိန် မိနစ် ၂၀၀၀ သာ ခွင့်ပြုတော့သည်။ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ဂစ်တ်ဟပ်ဘ် တွင်သုံးစွဲသူသန်း ၄၀ ကျော်ရှိပြီး၊ (အနည်းဆုံး ၂၈ သန်းသောအများပြည်သူများ ဆက်သွယ်ကြည့်ရှုရယူနိုင်သော ရီပိုစစ်တရီများ  အပါအဝင်) ရီပိုစစ်တရီ သန်း ၁၀၀ ကျော် ရှိသည်။ ထိုကြောင့်လည်း ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်ကို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရင်းမြစ်ကုဒ် သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းရာ နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်ရန်အတွက် စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသော ကွန်ယက် (အင်္ဂလိပ်ဝီကီ)
ပြဿနာဖြေရှင်းမှုအတွက် စုပေါင်းထားသော အသိဉာဏ် (အင်္ဂလိပ်ဝီကီ)
လူအများ အင်တာနက်သုံး ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခြင်း(ဥပမာ - ဤဝီကီပီးဒီးယားပရောဂျက်လိုမျိုး) (အင်္ဂလိပ်ဝီကီ)
ရင်းမြစ်ကုဒ်သိုလှောင်နေရာဌာနများအား ယှဉ်ကြည့်ခြင်း (အင်္ဂလိပ်ဝီကီ)
↑ GitHub Diversity။
↑ github.com Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic - Alexa။ 13 January 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Microsoft has acquired GitHub for $7.5B in stock (in en-US)။
↑ "GitHub Pours Energies into Enterprise – Raises $100 Million From Power VC Andreessen Horowitz"၊ TechCrunch၊ July 9, 2012။ "Andreessen Horowitz is investing an eye-popping $100 million into GitHub"
↑ Why GitHub's pricing model stinks (for us) (November 7, 2012)။ June 29, 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 29, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Problem With Putting All the World's Code in GitHub (June 29, 2015)။ June 29, 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 29, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ nat (2019-01-07)။ New year, new GitHub: Announcing unlimited free private repos and unified Enterprise offering (in en-gb)။
↑ GitHub is now free for all teams။ techcrunch.com။ 2020-05-01 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2020-05-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ User search (in en)။ “Showing 40,206,691 available users”
↑ Repository search for public repositories (in en)။ “Showing 28,177,992 available repository results”
↑ GitHub passes 100 million repositories (in en-US) (2018-11-08)။
↑ "Lean GHTorrent: GitHub Data on Demand" . The Netherlands: Delft University of Technology & †Eindhoven University of Technology. Retrieved on July 9, 2014. “During recent years, GITHUB (2008) has become the largest code host in the world.”
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်&oldid=528956" မှ ရယူရန်
Articles containing potentially dated statements from ဇန်နဝါရီ 2020
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၁၇:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။